စက်တင်ဘာလ 2012 – တေလာ Lopes ツဘလော့
လ: စက်တင်ဘာလ 2012
ဂျာဗားအနေနဲ့ object-oriented language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မရအပြည့်အဝ, အရာအားလုံးအရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်သောကြောင့်,. ကျနော်တို့ဒါခေါ် Primitive အမျိုးအစားများရှိ!
30 စက်တင်ဘာလ 2012 တေလာ Lopes	java, စရိုက်အမျိုးအစားများ	2 မှတ်ချက်များ
ပုံနှိပ်ပါ site ကိုတိကျသောဧရိယာ CSS ကို
အစဉ်အဆက်ဆိုက်ကသာတိကျတဲ့ဧရိယာ print ထုတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်? ထိုအခါ, ဒီပုံနိုပ်နိုင်သောဧရိယာကိုသတ်မှတ်ဖို့ဘယ်လို? CSS ကိုဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါသည်!
25 စက်တင်ဘာလ 2012 တေလာ Lopes	div မမြင်ရတဲ့အခါ, ပုံနှိပ်, css နှင့်အတူပုံနှိပ်, ပုံနှိပ်ပါ div, မီဒီယာပုံနှိပ်ပါ	5 မှတ်ချက်များ
ပျက်ကွက် button ကို “facebook နှင့်အတူချိတ်ဆက်” SFC plugin ပြုပါ
အဆိုပါ “ရိုးရှင်းက Facebook Connect ကို” (SFC) ဒါဟာအသုံးပြုသူသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်နှင့်အတူ WordPress ကိုကို log in လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ plugin ကိုဖြစ်ပါတယ်, အခြားအမှုအရာတို့ကိုအကြား. သို့သော်ထိုသို့ခလုတ်ကိုဖွစျနိုငျ “facebook နှင့်အတူချိတ်ဆက်” အလုပ်မ. troubleshoot နှင့်ဘာသာပြန်ဆိုဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
20 စက်တင်ဘာလ 2012 တေလာ Lopes	facebook နှင့်အတူချိတ်ဆက်, plugin ကို, SFC, ရိုးရှင်းက Facebook Connect ကို, ဘာသာပြန်ချက်, wordpress	မှတ်ချက် Leave
Transposh plugin ကို WordPress ကို pt_BR အင်္ဂလိပ်လိုနေဖို့စေသည်
သငျသညျဖြင့် Transposh plugin ကို WordPress ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ, ဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက်သင့်ရဲ့ site ကိုဆက်သအသုံးဝင်သော, အလိုအလျှောက်သုံးစွဲခဲ့သည့်အုပ်ချုပ်ရေး panel ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်, pt_BR ဟုသတ်မှတ်လျှင်ပင်. အဘယ်သို့ပြုရပါဖို့?
16 စက်တင်ဘာလ 2012 တေလာ Lopes	pt_BR, Transposh, wordpress	မှတ်ချက် Leave
Wampserver – ပျောက်ဆုံး msvcr100.dll [ပြေလည်]
WampServer ၏ installation စဉ်အတွင်း2အဘယ်သူမျှမက Windows7အမှားဖြစ်ပေါ်နိုင်သလား: “က msvcr100.dll ပျောက်ဆုံးကြောင့်အဆိုပါအစီအစဉ်စတင်ရန်မနိုင်“. ဤတွင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုဖွင့်!
13 စက်တင်ဘာလ 2012 တေလာ Lopes	erro wampserver, msvcr100.dll, vcredist_x86.exe. vcredist_x64.exe, Visual C ++	3 မှတ်ချက်များ
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.468.489 ဝင်ရောက်ခွင့်